Qubrus ayaa 45 qof oo ajaanib ah ka xayuubisay baasabooradooda maalgashiga Visa Dahabka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Qubrus » Qubrus ayaa 45 qof oo ajaanib ah ka xayuubisay baasabooradooda maalgashiga Visa Dahabka ah
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Qubrus • Wararka Dowladda • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Qubrus ayaa 45 qof oo ajaanib ah ka xayuubisay baasabooradooda maalgashiga Visa Dahabka ah.
Guddiga Yurub wuxuu ku dhaleeceeyay Qubrus bixinta baasabooradaan, isagoo ku andacoonaya in “qiimaha Yurub uusan iib ahayn,” wuxuuna ku eedeeyay qorshaha “in laga ganacsado muwaadinnimada Yurub si loo helo dhaqaale.”
Qubrus waxay go’aansatay inay dhalashada Qubrus ka saarto 39 maalgashade iyo 6 xubnood oo qoysaskooda ah.
Qubrus ayaa sidoo kale baaraysa lix kiis oo kale, waxayna 47 kale dul dhigtay kormeer joogto ah.
Qubrus waxay oggolaatay bishii Oktoobar ee sanadkii hore inay soo afjarto qorshaheeda Visa Dahabka ah 1 -da Noofambar, 2020.
Saraakiisha dawladda Qubrus ayaa maanta sheegay inay si rasmi ah dib ugu soo celin doonaan baasaaboorada lacag caddaan ah ee 'Visa Visa' ee loogu talagalay muwaadinnimada 39 ajaanib ah oo ku helay dhalashada Qubrus qorshe hoos-u-dhac maalgashi. Lix ka mid ah dadka ku tiirsan ayaa sidoo kale laga qaadi doonaa baasabooradooda Qubrus.
Cyprus Golaha Wasiirradu waxay ku dhawaaqeen go'aanka ah in meesha laga saaro "muwaadinnimada Qubrus ee maal -gashadayaasha 39 iyo 6 xubnood oo qoysaskooda ah," iyadoo aan la cayimin magacyada shaqsiyaadka ay saamaysay in kastoo.
Dowladda ayaa sidoo kale la sheegay inay baareyso lix kiis oo kale oo khiyaano ah, waxayna 47 kale "si joogto ah ula socotaa… iyadoo ku saleysan habraacyada la bixiyay."
Qubrus ayaa oggolaatay bishii Oktoobar ee sannadkii hore inay joojiso Mashruuca Visa Dahabka ahe 1 -da Noofambar, 2020, taas oo u oggolaatay dadka ajnabiga ah inay sugaan xuquuqda deggenaanshaha iyo muwaadinimada si ay malaayiin u geliyaan dalka. Si aad ugu qalanto, shaqsiyaadku waa inay, ugu yaraan, ku maalgeliyaan million 2 milyan ($ 2.43 milyan) guryaha Qubrus oo ugu sarreeya deeqda sanduuqa cilmi -baarista dowladda.
Qorshaha, oo loogu magac daray lacag caddaan-dhalasho, ayaa loo malaynayaa inay aruurisay billion 7 bilyan ($ 8.12 bilyan) ka hor intaanay dawladdu aqbalin inay u furan tahay “dhiig -miirashada xadgudubka ah.”
Qiyaastii 7,000 oo qof ayaa loo malaynayaa inay qorshahan sugeen muwaadinimo ka hor intii aan la xidhin, iyada oo guddi ay dawladdu magacowday markii dambe ay ogaadeen in ka badan 53% dadka baasaboorada ku qaatay habkan si sharci darro ah.
Marka shaqsi helo baasaboorka Qubrus, waxay awoodi doonaan inay safraan, shaqeeyaan, oo degaan mid ka mid ah dalalka kale ee xubnaha ka ah Midowga Yurub. Markii hore, Komishanka Yurub ayaa dhaleeceeyay Cyprus siinta baasabooradaan, iyagoo ku andacoonaya in “qiyamka reer Yurub aan la iibin,” kuna eedaynaya qorshaha “ka ganacsiga muwaadinimada Yurub faa’ido dhaqaale”.